Coreboot 4.13 inosvika nerutsigiro rwemakumi matanhatu nemapfumbamwe, vhezheni itsva yeSMM uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Coreboot 4.13 inosvika nerutsigiro rwemabhodhi makumi matanhatu nenomwe, vhezheni itsva yeSMM nezvimwe
Kutanga kwe iyo itsva vhezheni yeprojekti "CoreBoot 4.13", vhezheni iyo vavaki 234 vakapinda mukugadzirwa uye vakagadzirirawo dzinopfuura mazana mana mazana mana neshanduko.
Kune avo vasingazive neCoreBoot, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi ndizvo yakavhurwa sosi imwe nzira kune yechinyakare Basic I / O System (BIOS) iyo yaive yatove paMS-DOS 80s PC uye ichitsiva neEFI (Yakabatanidzwa Yakawedzerwa). CoreBoot zvakare yemahara proprietary firmware analog uye inowanikwa kuti izere kuongorora uye kuongorora. CoreBoot inoshandiswa seye base firmware ye Hardware kutanga uye boot kurongeka.
1 Main nyowani maficha eCoreboot 4.13
Main nyowani maficha eCoreboot 4.13
Yeyakanyanya shanduko inomira mushanduro iyi nyowani, imwe yacho ndiyo iyo yakawedzera rutsigiro rwemama boardboard makumi matanhatu nenomwe, Makumi mana nemaviri ayo anoshandiswa pamidziyo ine Chrome OS kana maSeva eGoogle.
Pakati pemabhodhi asiri eGoogle, anotevera anotaurwa:
Asus A88XM-E FM2 +
Clevo L140CU / L141CU
Vhura Compute Project DeltaLake
Imwe shanduko yakakosha mune iyi nyowani vhezheni yeCerboot 4.13 ndeyekuti yakapihwa yako kuitisa iyo kodhi yepasi masisitimu pane Bay Trail chip, yakaenzana nekodebase yakapihwa neIntel.
Iyo tsika yekutumira kodhi ichaita inoderedza zvinhu zvekunze zvinodiwa kuti zvishande zvakanaka kune imwechete MRC.bin faira (memory memory kodhi) inodikanwa kurodha.
Yakawedzerwa kutanga rutsigiro rweIntel TXT (Yakavimbika eXecution Technology), yakakwana kumhanyisa iyo tboot (Yakavimbika Boot) module. Kuteedzera kunoedzwa paAsrock B85M Pro4 (Haswell) TPM 2.0 mamaboard.
Kunze kwaizvozvo zvakare akawedzera "yakavanzwa" chiratidzo chekugadzirisa yemidziyo yePCI mumuti wedhizaini, ichibvumidza kugadzirisa zvishandiso zvakavanzwa, zvine parameter inoita kunge isipo kubva kuchinhu (mutengesi ID 0xFFFF_FFFF). Midziyo yakafanana inoshandiswa muIntel PMC (Power Management Controller).
Zvishandiso zvakawedzerwa gen_spd.go uye gen_part_id.go kuburitsa ruzivo rweSPD (Serial Presence Detect) yeLP4x ndangariro uye nekupa zvitupa zvemamodule ekurangarira anoshandiswa mumabhodhi akavakirwa TGL uye JSL.
Tsigiro yeOpen Compute Project SonoraPass mamaboard uye mana eGoogle mabhodhi abviswa.
Shanduro nyowani yeSMM bootloader yakafemerwa, iyo inogona kushanda pamapuratifomu ane anopfuura makumi matatu nemaviri CPU tambo.
An Address Sanitizer debugging mechanism yakaitwa Yakavakirwa-mukati kuti uone kutendeseka kwebasa nendangariro, zvichikubvumidza iwe kuona matambudziko senge buffer inopfachukira. Injini inogona kushandiswa mune ramstage uye romstage yeQEMU i440fx, Intel Apollo Lake uye Haswell.
Pakutanga tsigiro ye x86_64 yakawedzerwa, ichibvumira inopfuura 4GB yekurangarira uye inosanganisira yakawanda yakagadziridzwa kodhi. Kuitwa kwacho kuchiri kungogumira pakushandisa mune emulator.
Gadziriro dzakaitwa kuitira kusarudzira PCI bhazi kugona, uko Kconfig yakawedzera marongero ayo anoita kuti zvikwanise kugonesa kugona kwebhasi padanho remapoka emidziyo ega.
Iko kugona kwekushandura iyo yekuburitsa nhanho yematanda kune iyo koni kunopihwa kubva kune romstage, yakaitwa mubhokisi rebhokisi.
Chinyorwa chechina chemugovanisi wezvekushandisa chakarongedzwa, icho chinowedzera rutsigiro rwekushandisa akasiyana masosi ezviwanikwa, uchishandisa iyo yese kero nzvimbo uye kugovera ndangariro munzvimbo dziri pamusoro pe4 GB.
Uye zvakare, tinogona kucherechedza basa rekupa rutsigiro muCoreBoot yemachipsets anoenderana neiyo AMD Zen microarchitecture.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Coreboot 4.13 inosvika nerutsigiro rwemabhodhi makumi matanhatu nenomwe, vhezheni itsva yeSMM nezvimwe
NASA uye yemahara software: inovimbisa nyaya